Waa maxay Sarkaalka Hawlaha Sare? 52 Wyndham Resorts ee Asia-Pacific hadda waxay ku tiirsan yihiin Emma Todd
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Waa maxay Sarkaalka Hawlaha Sare? 52 Wyndham Resorts ee Asia-Pacific hadda waxay ku tiirsan yihiin Emma Todd
Jebinta Wararka Caalamka • News • Dadka • jiga • Wararka Singapore • Dalxiiska
Emma Todd waxaa loo magacaabay Madaxa Hawlaha, Wyndham Destinations Asia Pacific.
Wyndham Destinations Asia Pacific waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo magacaabista Emma Todd oo ah sarkaalkeedii ugu horreeyay ee Hawlaha ee Aasiya Baasifigga.
Talaabadan waxaa loogu talagalay in lagu taageero hindisaha shirkadda ee dhawaanahan lagu wanaajinayo joogitaanka martida iyo naadiyada iyada oo la soo bandhigayo hawlo badan oo ka socda Club Wyndham South Pacific oo ay maamusho, Wyndham, Wyndham Grand iyo Ramada ee meelaha loo dalxiis tago ee Wyndham.
U dhaqaaqista Wyndham Destination Asia Pacific si loogu dhawaaqo Sarkaalka Hawlaha ugu sareeya waxaa loogu talagalay in lagu taageero hindisaha shirkadda ee lagu wanaajinayo martida iyo xubnaha naadiga iyadoo la soo bandhigayo dhaqdhaqaaqyo badan oo ay maamusho Club Wyndham South Pacific, Wyndham, Wyndham Grand, iyo Ramada oo ku taal Wyndham Resorts.
Laga soo bilaabo mootada elektaroonigga ah iyo baaskiillada elektaroonigga ah ilaa sabuuradaha kor loo qaado iyo looxyada boogies, dahabka iyo macdan qodista dhagaxa, baabuur-tuugleyda, iyo in ka badan, in ka badan 100 waayo-aragnimo ayaa lagu daray ururinta dalxiiska ee shirkadda sannadkii la soo dhaafay. Dhaqdhaqaaqyadu waa u bilaash xubnaha Club Wyndham South Pacific waxaana la kulmi kara kharash yar martida dalxiiska.
Marwo Todd waxay khibrad badan u leedahay warshadaha soo dhawaynta. Iyadu hadda waa Maareeyaha Guud ee Club Wyndham Seven Mile Beach ee Hobart, Tasmania. Waxay u beddeshay guriga mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee Club Wyndham ee Australia. Waxay hogaamisay samaynta beerta hiwaayadaha ee dalxiiska iyo beerta khudaarta, oo ay weheliso shaaha biilka ah iyo waayo-aragnimada qoyaanka leh ee lagu qabto toddobaadkiiba mar dab furan. Waxa kale oo jira socod flora iyo fauna eco ah iyo ugaarsiga qaaliga ah ee baaskiilka.
"Waan ku faraxsanahay inaan qaato doorkan cusub ee xiisaha badan. Waxay ahayd wax cajiib ah inaan aragno jawaabta togan ee xubnaha naadiga iyo martidayada tan iyo markii aan soo bandhignay waxqabadyada, ayay tiri Ms. Todd.
- Waaya-aragnimadu waxa ay xaqiiqdii ka dhigtay joogitaankayada dalxiiska mid xusuus badan. Baaskiilada elektaroonigga ah, sida hal tusaale, waxay siinayaan booqdayaasha fursad ay si fiican u sahamiyaan gobolka, waxaana dooranay hawlo dheeraad ah oo u gaar ah goob kasta. Goobta Club Wyndham Denarau Island ee Fiji tusaale ahaan waxaa jira bowling qumbaha iyo aqua tramp. Ballarat, Fiktooriya, waxaa ku yaal dahab iyo sluice gems iyo waayo-aragnimada kale. Markaa martida mar walba waxay sugi karaan wax ka duwan,” ayay raacisay.
Doorkeeda cusub, Marwo.
Warren Cullum, Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare ee Hudheelada iyo Hawlaha Dalxiiska, Wyndham Destinations Asia Pacific ayaa yidhi, "Emma waa ku habboon doorka doorka iyada oo rikoodhkeeda cajiibka ah ee abuurista hawlo gaar ah xubnaha naadiyada iyo martidayada. Mudadii ay nala joogtay, waxa ay ku kasbatay sumcad ah hal-abuur iyo hal-abuurnimo. Waxaan rajeyneynaa inaan aragno hindiseyaal aad u xiiso badan oo la soo bandhigay si kor loogu qaado khibradaha martida iyo xubnaha kooxda. "
Marwo. Emma waxay sii wadi doontaa inay gudato doorkeeda maamulaha guud ee Club Wyndham Seven Mile Beach iyadoo qaadanaysa doorkan cusub ee xiisaha leh.